Waxyaabaha Gated ama Gates-ga ah: Goorma? Sababta Sidee ... | Martech Zone
Ku gaadhitaanka dhagaystayaashaada adoo ku dhexgalaya dhaqankooda dhijitaalka ah waxay si dabiici ah uga sii heli kartaa iyada oo loo marayo xayeysiinta la beegsanayo iyo warbaahinta. Helitaanka sumaddaada xagga hore ee maskaxda iibsadahaaga, inaad ka caawiso inay noqdaan kuwo aad uga warqaba astaantaada oo aan rajeynayo inay u galaan safarka iibsadaha ee caanka ah ayaa si aad ah u adag. Waxay qaadataa waa nuxur u eg baahiyahooda iyo danahooda, isla markaana loogu adeego iyaga waqtiyada ugu habboon si loo sii hurinayo hawshaas.
Si kastaba ha noqotee, su'aasha sii socota ee la weydiinayo ma tahay inaad "ka qariso" qaar ka mid ah waxyaabahaas dhagaystayaashaada?
Waxay kuxirantahay ujeedooyinkaaga ganacsi, qarinta ama "qafiska" qaar kamid ah waxyaabahaaga ayaa si aan caadi aheyn saameyn ugu yeelan kara jiilka hogaaminta, xog aruurinta, qeybinta, suuq geynta emaylka, iyo abuuritaanka aragti ah qiime ama hogaamin fikir fikirkaaga.
Maxaa looga baahan yahay Albaabka Albaabka?
Waxyaabaha ay ka kooban tahay qiimeynta waxay noqon kartaa xeelad aad u qiimo badan marka la raadinayo in la dhiso ololeyaal kobciya oo laga soo ururiyo macluumaadka ku saabsan bartilmaameedkaaga. Dhibaatada dhacda marka qolku wax badan ka qodayo ayaa ah inaad ka reebayso dhagaystayaasha suurtagalka ah, gaar ahaan dadka isticmaala raadinta. Haddii macluumaadkaaga si guud looga heli karo websaydhkaaga-laakiin uu dahaadhay-albaabkaasi wuxuu ka horjoogsan karaa dhagaystayaasha inay helaan ama arkaan. Istaraatiijiyadda qormooyinka gaasku waa mid si fudud loogu dhiirrigelinayo dadka isticmaala inay macluumaad ku saabsan naftooda ku siiyaan qaab ay ku helaan mushahar bixinta.
Khatarta ay leedahay qormooyinka gaasku si siman ayey u fududahay: haynta waxyaabaha khaldan waxay ka hor istaagi kartaa dhagaystayaashaada inay sii dhex galaan astaantaada.
Falanqaynta Mawduucyada Qiimeynta / Qoritaanka?
Qaabka loo falanqeeyo waxyaabaha kafiican albaabka iyo albaabka waxaa loo kala qaadi karaa seddex qaybood:
Marxaladda Safarka Macaamiisha
Raadinta Su'aal Cod
Hyper-bartilmaameedsan, Mawduuc wanaagsan
Su'aalaha Heerka Safarka Macaamiisha:
Marxalad noocee ah ayaa safarka macaamiisha ay ku jiraan?
Iyagu ma yihiin kuwa ugu sarreeya ee masraxa oo kaliya wax ka barta shirkaddaada?
Ma yaqaanaan astaantaada?
Waxyaabaha loo yaqaan 'Gates' ayaa si aad ah waxtar ugu leh kobcinta iyo soo ururinta xogta marka macaamilku u dhexeeyo tixgelinta iyo soo iibsiga maxaa yeelay waxay aad ugu diyaar yihiin bixinta macluumaadkooda si ay u helaan waxyaabaha qiimaha leh. Adoo abuuraya "saameynta xargaha jilicsan" ee ka-saarnaanta, isticmaalaha ayaa u badan inuu bixiyo macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxyaabaha "caymiska" ah, laakiin haddii dhammaan waxyaabaha la qoro, waxay luminaysaa saameynteeda la beegsanayo.
Sidoo kale waa ka qiimo badan tahay inaad tixgeliso tixgelinta gaarka ah iyo helitaanka waxyaabaha shirkaddaada maxaa yeelay waxaad si wanaagsan u bartilmaameedsan kartaa dhagaystayaashooda oo aad ku sii hayn kartaa dhagaystayaasha.
Su'aalaha Goobta Weydiinta Raadinta:
Maxay yihiin ereyada raadinta ee muhiimka ah ee loo adeegsaday mawduucan?
Dadku ma raadinayaan ereyadan?
Ma waxaan dooneynaa dadka baaraya ereyadan inay helaan waxyaabahayaga mise maya?
Dhagaystayaasha raadintu ma yihiin kuwa aan ugu talo galnay
Qaybaha gates-ka ee baarayaashu waxay ka baaraandegayaan waxyaabo qiimo leh sidaa darteed haddii aadan rumaysan in dhagaystayaasha dabiicigu ay ka heli doonaan qiimo ku jira mawduucaaga, ka saarista raadinta (qaniinyadeeda) ayaa si fudud taas u samayn doonta. Caqabada ugu weyn markaad ka jawaabeyso su'aalahan ayaa ah go'aaminta inaad ku seegi doonto taraafikada raadinta dabiiciga ah ee qiimaha leh adoo sheegaya waxyaabaha ku jira Adeegso Qalabka Google Webmaster si aad u ogaato haddii dhagaystayaasha raadinaya adiga ereyada muhiimka ah ee ku jira mawduuca waa ku filan yahay. Haddii baarayaashani ay yihiin isticmaaleyaashaada loogu talagalay, tixgeli inaad uga tagto waxyaabaha aan taariikhda ku jirin.
Intaa waxaa sii dheer, adoo ku calaamadeynaya waxyaabaha ka soo horjeedda marxaladda safarka macaamiisha, waxaad u oggolaaneysaa naftaada inaad dhisto masrax safar oo habeysan. Tusaale ahaan, wacyigelinta (top-of-the-funnel) waxay noqon kartaa mid guud ahaaneed iyo mid dadweyne soo wajaha iyadoo hoos loo sii dhigayo masaafada uu adeegsadaha adeegsanayo, sida ugu qiimaha badan ayaa iyaga loogu talagalay. Sida wax kasta oo qiimo leh, dadku waxay diyaar u yihiin inay "wax siiyaan" / bixiyaan.
Su'aalaha ku saabsan Mawduucan bartilmaameedsan:
Mawduucan ma si gaar ah diirada loogu saaray barnaamijka, warshadaha, wax soo saarka, dhagaystayaasha, iwm.
WDadweynaha guud miyay u arki lahaayeen inay ka kooban yihiin rafcaan ama mid khuseeya?
Mawduucu ma mid gaar ah baa ku filan mise waa mid aan caddayn?
Marka lagu daro khariidaynta nuxurka safarka macaamiisha iyo fahamka qiimaha raadinta dabiiciga ah ee maaddadaada, sidoo kale waxaa jira tixgelinta dhibaatada maaddadaada xallinaysa. Waxyaabo aad u gaar ah oo ka hadlaya baahida saxda ah, rabitaanka, barta xanuunka, qaybta cilmi baarista, iwm. Waxay hagaajineysaa fursadaha dhagaystayaasha ay ku soo bandhigayaan macluumaadkooda shaqsiyadeed. Macluumaadkaas ayaa markaa loo isticmaali karaa in lagu kala qaybiyo booqdayaasha goobta, shakhsiyaadka, oo ay u ekaadaan astaamo isku mid ah ololeyaal sax ah si hadhow looga faa'iideysto taabashada kale ee suuqyada badan leh sida emaylka, suuqgeynta otomaatiga / kobcinta hoggaaminta, ama qeybinta bulshada.
Ugu dambeyntiina, qashin-qubka iyo ka-sheekaysiga qashin-qubka waxaa si habsami leh loogu hawlgelin karaa habab istiraatiiji ah. Talada guud waxay noqoneysaa in si sax ah loo calaamadeeyo waxa ku jira isla markaana cinwaan looga dhigo qeybaha lagu qiimeyn doono "qadarin" ama aan ahayn.
Waqtiga ay isticmaaleyaasha dhijitaalka ahi si joogto ah ugu qulqulayaan waxyaabaha ugu habboon ee iyaga ku saabsan, waxaa muhiim ah in la fahmo sida loogu kobciyo iyada oo loo marayo istiraatiijiyad istiraatiijiyadeed oo ah waxyaabaha dahaarka ah iyo kuwa aan duugoobayn. Dhexgalka dabeecadooda ayaa fure u ah taabashadaas ugu horreysa, laakiin waxyaabaha ku habboon, waqtiga saxda ah, ee "qiimaha" saxda ah ee isticmaalaha ayaa ah waxa ka ilaalin doona inay dib ugu soo laabtaan.
Tags: safarka contentSafarka macaamiishaheerka safarka macaamiishawaxyaabaha ku dahaadhangaaska ka koobanbartilmaameed sareraadinta mugga weydiintawaxyaabaha la bartilmaameedsaday
Mike waa Istiraatiijiyadda Suuqgeynta Dijital ah ee Sare R2i. Wuxuu si aad ah u jecel yahay waxyaabaha ku jira; abuuritaankiisa, suuqgeyntiisa, cunitaankiisa, falanqeyntiisa iyo hagaajintiisa. Anigoo ah xiriiriye dabiici ah oo shahaado qoraal ah, sanado badan oo lahaanshaha shirkad sawir qaadis ah iyo balwado ku saabsan suuqgeynta suuqyada dhijitaalka ah, waayo-aragnimadayda iyo hamidaygu si qurux badan ayey isugu darsameen sidii istiraatiijiyad suuq-geyn sare ah.